को को हुन् एमालेमा पिलो बनेर कैटिएकाहरु ? - Baikalpikkhabar
को को हुन् एमालेमा पिलो बनेर कैटिएकाहरु ?
५ भाद्र / नेपाललाई छाडेका नेपालपक्षका नेताहरुले ओलीलाई तुरुन्तै नअँगाल्ने नीति लिएका छन्। बुधबार राति ११ बजेसम्म र बिहीबार दिनभर छलफल गरेका उनीहरुले निशर्त ओलीसँग मिल्न नजाने निष्कर्ष निकालेका हुन्। उनीहरुको साझा धारणा छ, ‘लडाइँ भनेको विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउँ भन्ने हो। एमालेलाई एमालेअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो लडाइँ अझै बाँकी छ।’
भिम रावल सहितका नेताले यो प्रतिक्रिया दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली पक्षको बैठकमा ओलीले उनीहरुलाई पार्टीको पिलो कैटिएको संज्ञा दिए । उनले पिलो बनेर कैटिएकाहरुको पार्टीमा काम नभएको बताएको ओली पक्षका एक नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाले (समाजवादी) पार्टीमा लागेकोहरुले उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, अृमतकुमार बोहरा र रघुजी पन्तलाई मैदानबाट भागेकोदेखि लाभको चास्नीमा डुबेकोसम्म आरोप लगाएका छन्।
रावलसहितका नेताहरुले भने नेकपा एमालेसँग नभइ ओली प्रवृत्तिसँग आफूहरुको लडाइँ रहेको उनीहरुले बताएका छन्। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको दिन नेपाल पनि एमालेमै आइपुग्ने उनीहरुको दाबी छ। नेपाललाई छाडेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अहिलेको बटमलाइन तत्कालीन एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बनाएका छन्।
एमालेले उक्त सहमति स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि उनीहरुको छ। १० बुँदे सहमति अनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने र २०७७ फागुन २८ पछि लिइएका सबै महत्वपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग हुनेछ।
शनिबार, ०५ भदौ, २०७८, बिहानको ०९:३४ बजे